ပုဂံမှာ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ ပရိသတ်ကို စိတ်မကောင်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဘေဘီမောင် - Zeekwat Hot News
ပုဂံမှာ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ ပရိသတ်ကို စိတ်မကောင်းစွာရင်ဖွင့်လာတဲ့ ဘေဘီမောင်
September 14, 20190242
ပရိသတ်ကြီးရေ…မော်ဒယ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဘေဘီမောင်ကို တော့ ပရိတ်တွေကို အထူးတလည် မိတ်ဆက် ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး ထင်ပါတယ်နော် …. ပြည်ပြည့် ဖောင်းဖောင်းနဲ့ အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ သူမ ကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ကိုယ်ပိုင်ပရိသတ်လေတွေ နဲ့ အောင်မြင်လာတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကောင်း တစ်ယောက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။
Photo Thar Gan
သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် ကောင်ကြောင်း အလှလေးတွေကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်စားသလို မိန်းကလေး ချင်လည်း ကြွေရလောက်တဲ့ ထိပ်တန်းမော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် တစ်ယောကလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ လတ်တေ လာအနုပညာ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေ ကတော့ အဖိတ်ခံ ပွဲလေးတွေကို အမိုက်စားဖက်ရှင် ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ တက်ေ ရာက် ချီးမြှင့်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။
သူမရဲ့ ပုံရိပ်လေးတေတွကို လည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် တခုဖြစ်တဲ့ သူမရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ် မှာ အမြဲတင် ဆက်ဖ်ာပြလေ့ရှိပြီး သူမရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေပါ သူမရဲ့ ချစ်ပရိသတ်တွေကို အမြဲ ချပြလေ့ရှိသူ တစ်ေ ယာက် လည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်။ ဘေဘီမောင်က ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ “ဘမျိုးဘိုးတူ” ဇာတ်ကားအတွက် ကန်တော့ပွဲပေး ခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို တင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘေဘီမောင်က အဲဒီဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင် မင်းရာဇာ၊ နဒီဝင့်နိုင် တို့နဲ့အတူ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဘီမောင်က ပုဂံကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့ ပရိသတ်ကြီးကို ပြောပြထားပါ တယ်။ “ပုဂံရောက်ပီးနေမကောင်းဖြစ်လို့ မြန်မာတစ်စုံနဲ့ပဲ ဝတ်ပီးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ရတဲ့ အမှတ်တရ အရေးထဲထိုင်ေ နချိန် အင်္ကျီလေးဆွဲချဖို့မေ့သွားတယ် အင်္ကျီလေးနဲနဲတွန့်😂 လှတဲ့နေရာလေး ရွေးရိုက်ပေးလို့ပုံ လှလှလေး ထွက်လာ တာ စိတ်ကမပါဘူး😔” ဆိုပြီး ပုဂံက ပုံရိပ်တွေကို ချပြထားပါတယ်။
လှပပြီး တည်ငြိမ်မူတွေနဲ့အတူ ကျက်သရေရှိလှနေတဲ့ ဘေဘီမောင်ရဲ့ မြန်မာဆန်တဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဇီးကွက်ပ ရိသတ်တွေ အတွက်လည်း ပြန်လည်လို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေနာ်။ ပရိသတ်တွေကလည်း ဘေဘီလေးကို ချစ်ရင် အမြန်နေကောင်းဖို့ ဂစိုက်ဖို့ပြောပေးခဲ့နော်………။ အနုပညာ ရှင်တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်လေးတွေကို သိရှိခံ စားနိုင်အောင်လို့ ဇီးကွက် Page လေးကို Like လေး လုပ်ထား ဖို့ ပြောခဲ့ပါရစေနော်.….…။
ပုဂံမှာ နမေကောငျးဖွဈနတေယျလို့ ပရိသတျကို စိတျမကောငျးစှာရငျဖှငျ့လာတဲ့ ဘဘေီမောငျ
ပရိသတျကွီးရေ…မျောဒယျနဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီးခြောလေး ဘဘေီမောငျကို တော့ ပရိတျတှကေို အထူးတလညျ မိတျဆကျ ပေးစရာ မလိုတော့ဘူး ထငျပါတယျနျော …. ပွညျပွညျ့ ဖောငျးဖောငျးနဲ့ အရမျးကို ခဈြစရာကောငျးနတေဲ့ သူမ ကတော့ လကျရှိအခြိနျမှာတော့ ကိုယျပိုငျပရိသတျလတှေေ နဲ့ အောငျမွငျလာတဲ့ သရုပျဆောငျကောငျး တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျနျော သူမရဲ့ အမိုကျစား ခန်ဓာကိုယျ ကောငျကွောငျး အလှလေးတှကွေောငျ့ ပုရိသတှကွေားမှာ ရပေနျစားသလို မိနျးကလေးခငျြလညျး ကွှရေလောကျတဲ့ ထိပျတနျးမျောဒယျ သရုပျဆောငျ တဈယောကလညျး ဖွဈပါတယျနျော။ သူမရဲ့ လတျ တလောအနုပညာ လှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှေ ကတော့ အဖိတျခံ ပှဲလေးတှကေို အမိုကျစားဖကျရှငျ ပုံရိပျလေးတှေ နဲ့ တကျရောကျ ခြီးမွှငျ့ပေးလရှေိ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ ပုံရိပျလေးတတှေကို လညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ တခုဖွဈတဲ့ သူမရဲ့ Facebook စာမကျြနှာပျေါ မှာ အမွဲတငျဆကျ ဖျောပွလရှေိ့ပွီး သူမရဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှပေါ သူမရဲ့ ခဈြပရိသတျတှကေို အမွဲ ခပြွလရှေိ့သူ တဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျနျော။ ဘဘေီမောငျက ရှတေိဂုံဘုရားမှာ “ဘမြိုးဘိုးတူ” ဇာတျကားအတှကျ ကနျတော့ပှဲပေးခဲ့တဲ့ ပုံတှကေို တငျထားတာ တှရေ့ပါတယျ။ ဘဘေီမောငျက အဲဒီဇာတျကားမှာ သရုပျဆောငျ မငျးရာဇာ၊ နဒီဝငျ့နိုငျ တို့နဲ့အတူ ပါဝငျသရုပျဆောငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဘဘေီမောငျက ပုဂံကိုရောကျရှိနတောဖွဈပွီး ကနျြးမာရေးမကောငျးဖွဈနတေယျလို့ ပရိသတျကွီးကို ပွောပွထားပါတယျ။ “ပုဂံရောကျပီးနမေကောငျးဖွဈလို့ မွနျမာတဈစုံနဲ့ပဲ ဝတျပီးဓာတျပုံရိုကျလိုကျရတဲ့ အမှတျတရ အရေးထဲထိုငျနခြေိနျ အင်ျကြီလေးဆှဲခဖြို့မသှေ့ားတယျ အင်ျကြီလေးနဲနဲတှနျ့😂 လှတဲ့နရောလေး ရှေးရိုကျပေးလို့ပုံ လှလှလေး ထှကျလာတာ စိတျကမပါဘူး😔” ဆိုပွီး ပုဂံက ပုံရိပျတှကေို ခပြွထားပါတယျ။ လှပပွီး တညျငွိမျမူတှနေဲ့အတူ ကကျြသရရှေိလှနတေဲ့ ဘဘေီမောငျရဲ့ မွနျမာဆနျတဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေို ဇီးကှကျပရိသတျတှေ အတှကျလညျး ပွနျလညျလို့ မြှဝပေေးလိုကျပါရစနျော။ ပရိသတျတှကေလညျး ဘဘေီလေးကို ခဈြရငျ အမွနျနကေောငျးဖို့ ဂစိုကျဖို့ပွောပေးခဲ့နျော………။ အနုပညာ ရှငျတှရေဲ့ နစေ့ဉျလှုပျရှားမှု ပုံရိပျလေးတှကေို သိရှိခံစားနိုငျအောငျလို့ ဇီးကှကျ Page လေးကို Like လေး လုပျထား ဖို့ ပွောခဲ့ပါရစနေျော.….…။
Propak Myanmar : Myanmar Expo ထိပ်တန်းထုတ်လုပ်ခြင်း နှင့် ထုတ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ ပြပွဲ ကြီး
ညစ်တွန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ Premiere Show ကို အမိုက်စား Fashion နဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ မခိုင်လေး